एमसीसीसँग अमेरिकी सेना आउँदैनन्- महत | eAdarsha.com
पोखरा । नेपाली काँग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालकै हितमा रहेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले पोखरामा सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै डा महतले अमेरिकाको जोडवलले नभई नेपालकै आवश्यकताले यो सम्झौता भएको तर्क गरे । ‘हाम्रो देशको आवश्यकता र स्वार्थ निश्चित देशसँग सहकार्य गरेर अनुदान ल्याउँदा आपत्ति जनाउनुपर्ने के छ,’ उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौताले अमेरिकी सेना नै नेपालमा आएर बस्ने भन्ने खालको हौवा फिजाइयो । यो गलत छ । यो सम्झौता शुद्ध नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि भएको हो ।’
उनले सत्तारुद्ध दलका नेता ‘आफै बोक्सी, आफै झाँक्री’ बनेर अनावश्यक रुपमा विरोधमा उत्रिएको टिप्पणी गरे । ‘२०१७ सालमा यो सम्झौता भएको हो । त्यतिबेला पनि यीनै नेताहरु केन्द्रमा थिए । कुनै गोप्य सहमतिबाट एमसीसी सम्झौता भएको होइन,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला के हेरेर बसेका थिएन ? ३ वर्षपछि यो बहसको विषय किन बन्यो ? यो सम्झौता अमेरिकाको भन्दा नेपालको स्वार्थमा छ । सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ ।’ उनले कुनै अमुक राजनीतिक दल र उसको प्रणालीसँग नभई देशसँग सम्झौता भएको बताए ।
सरकारका गतिविधिसँग जनता असन्तुष्ट भएका उनको भनाइ छ । ‘ऊ बेला जे प्रचार गरेर चुनाव जित्नुभो सबै प्रतिबद्धता अहिले चटक्कै बिर्सिनुभएको छ । जनता निराश छन्,’ महतले भने, ‘सरकार पूरै नियन्त्रण र निषेधमा केन्द्रित छ । शासन गर्ने लाइसेन्स पायौं भनेर गलत मानसिकता बोकेको छ ।’ पूर्व मन्त्री समेत रहेका महतले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति अपारदर्शी ढंगले यती ग्रुपलाई दिइएको भन्दै विरोध जनाए । संसद्मा काँग्रेस कमजोर भएपनि गलत विधेयकविरुद्ध जनतालाई जानकारी गराएको र संसद्बाटै विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयले नेविसंघ र काँग्रेससँग समन्वय नगरी स्ववियु चुनावको मिति तोकेको भन्दै उनले त्यो मिति काँग्रेसका लागि अमान्य रहेको बताए । ‘केन्द्रिय समिति नभएको बेला ग¥यो भने चलखेल गर्न पाइन्छ भनेर यो मिति तोकिएको छ । हामीलाई यो मान्य छैन,’ उनी भन्छन््, ‘पार्टीले प्रतिनिधि खटाउँछ उनीहरुसँग समन्वय गरेर मात्रै नयाँ मिति तोकिनुपर्छ ।’ नेविसंघ लगायत भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन केही समयभित्रै गरिसक्ने उनको दाबी छ । काँग्रेसको महाधिवेशन पनि तोकिएकै मितिमा हुने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय समिति बैठकले २०७७ फागुन ७ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल प्रेस युनियन कास्की अध्यक्ष नवीन सिग्देलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सापकोटा र सञ्चालन सहसचिव ज्योति हमालले गरेकी थिइन् ।